လကျသညျးခှံပျေါက အဖွူရောငျ လခွမျးလေးတှရေဲ့ အဓိပ်ပါယျ – စှယျစုံသုတ
သငျ့ရဲ့ လကျခြောငျးလေးတှကေို ကွညျ့တဲ့အခါ လကျသညျးခှံ အရငျးနရော ကနေ ထှကျလာတဲ့ အဖွူရောငျ လခွမျးသဏ်ဍာနျလေးတှကေို သတိပွုမိ ပါသလား။
တကယျတော့ ဒီလခွမျးလေးတှကေ လကျသညျးရဲ့ အရမျးကို အရေးပါတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။
လကျသညျးခှံပျေါက အဖွူရောငျ လခွမျးလေးတှရေဲ့ အဓိပ်ပါယျ1
ဒါက လကျသညျးမှာ ပါတဲ့ အစိတျအပိုငျး တဈခုဆိုတာထကျ ပိုပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ ဒီလခွမျးလေးတှေ ကတဆငျ့ သငျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေး အခွအေနကေို အမြားကွီး သိနိုငျလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ….
တရုတျဆေးပညာမှာ လကျသညျးပျေါက လခွမျးလေးတှကေို လဖေိအားတိုငျး ကိရိယာလိုပဲ ကနျြးမာရေးကို တိုငျးတဲ့ ကိရိယာတဈခု အနနေဲ့ မှတျယူ ပါတယျ။ လခွမျးရဲ့ အခွအေနကေ သငျ့ကနျြးမာရေး သင်ျကတေပါ။
ကနျြးမာရေး ခြှတျယှငျးလာတဲ့ အခါမှာ လခွမျးက ပွောငျးလဲလာတာ၊ လုံးဝ ပြောကျသှားတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးပွနျကောငျးလာတဲ့ အခြိနျမှာ လခွမျးလေးတှကေ မူလအခွအေနအေတိုငျး ပွနျဖွဈလာတတျ ပါတယျ။
ဆေးပညာရှငျမြားရဲ့ အဆိုအရ လကျခြောငျး ၈ ခြောငျးကနေ လကျခြောငျး အားလုံးပျေါမှာအထိ လခွမျးတှေ ရှိနမေယျ ဆိုရငျ ကနျြးမာရေးက အကောငျးဆုံး အခွအေနမှော ရှိနတောကို ပွပါတယျ။ လခွမျးက ပိုဖွူလေ ကနျြးမာရေး ပိုကောငျးလပေဲ ဖွဈပါတယျ။
လခွမျးတှကေို ၈ ခြောငျးအောကျ ပိုနညျးပွီး တှရေ့မယျ ဆိုရငျ စှမျးအငျ ပိုနညျးသှားပွီး ခုခံအားစနဈလညျး အားနညျးနတောကို ပွတာဖွဈ ပါတယျ။ လကျမ နှဈခြောငျးပျေါမှာပဲ လခွမျးတှေ ရှိတယျ ဆိုရငျတော့ အလှယျတကူ နာမကနျြးဖွဈ နိုငျတယျ ဆိုတာကို သိထားရပါမယျ။
သိုငျးရှိုကျဂလငျး၊ သံဓာတျ အားနညျးတာ၊ နာတာရှညျကြောကျကပျရောဂါ၊ စိတျကရြောဂါ ၊ ဗီတာမငျဘီ 12 ခြို့တဲ့ရောဂါတှဖွေဈ တတျပါ တယျ။
သငျ့ရဲ့ အိုငျအိုဒငျး ပမာဏနဲ့ ဗီတာမငျဘီ 12 ပမာဏကို စဈဆေး ကွညျ့သငျ့ ပါတယျ။ သိုငျးရှိုကျ အလုပျလုပျပုံနဲ့ သှေးဖိအားတှနေဲ့လညျး ဆကျစပျ နတေတျပါတယျ။
သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ လက်သည်းခွံ အရင်းနေရာ ကနေ ထွက်လာတဲ့ အဖြူရောင် လခြမ်းသဏ္ဍာန်လေးတွေကို သတိပြုမိ ပါသလား။
တကယ်တော့ ဒီလခြမ်းလေးတွေက လက်သည်းရဲ့ အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက လက်သည်းမှာ ပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီလခြမ်းလေးတွေ ကတဆင့် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို အများကြီး သိနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
တရုတ်ဆေးပညာမှာ လက်သည်းပေါ်က လခြမ်းလေးတွေကို လေဖိအားတိုင်း ကိရိယာလိုပဲ ကျန်းမာရေးကို တိုင်းတဲ့ ကိရိယာတစ်ခု အနေနဲ့ မှတ်ယူ ပါတယ်။ လခြမ်းရဲ့ အခြေအနေက သင့်ကျန်းမာရေး သင်္ကေတပါ။
ကျန်းမာရေး ချွတ်ယွင်းလာတဲ့ အခါမှာ လခြမ်းက ပြောင်းလဲလာတာ၊ လုံးဝ ပျောက်သွားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ လခြမ်းလေးတွေက မူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာတတ် ပါတယ်။
ဆေးပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ လက်ချောင်း ၈ ချောင်းကနေ လက်ချောင်း အားလုံးပေါ်မှာအထိ လခြမ်းတွေ ရှိနေမယ် ဆိုရင် ကျန်းမာရေးက အကောင်းဆုံး အခြေအနေမှာ ရှိနေတာကို ပြပါတယ်။ လခြမ်းက ပိုဖြူလေ ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လခြမ်းတွေကို ၈ ချောင်းအောက် ပိုနည်းပြီး တွေ့ရမယ် ဆိုရင် စွမ်းအင် ပိုနည်းသွားပြီး ခုခံအားစနစ်လည်း အားနည်းနေတာကို ပြတာဖြစ် ပါတယ်။ လက်မ နှစ်ချောင်းပေါ်မှာပဲ လခြမ်းတွေ ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ အလွယ်တကူ နာမကျန်းဖြစ် နိုင်တယ် ဆိုတာကို သိထားရပါမယ်။
လေ့လာမှု တစ်ခုအရ လက်သည်းခွံ အားလုံးမှာ လခြမ်းတွေ လုံးဝ မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ မညီမျှမှုတွေ အများကြီးဖြစ်နေ တာကို ပြတာပဲဖြစ် ပါတယ်။
သိုင်းရွိုက်ဂလင်း၊ သံဓာတ် အားနည်းတာ၊ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ စိတ်ကျရောဂါ ၊ ဗီတာမင်ဘီ 12 ချို့တဲ့ရောဂါတွေဖြစ် တတ်ပါ တယ်။
သင့်ရဲ့ အိုင်အိုဒင်း ပမာဏနဲ့ ဗီတာမင်ဘီ 12 ပမာဏကို စစ်ဆေး ကြည့်သင့် ပါတယ်။ သိုင်းရွိုက် အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ သွေးဖိအားတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ် နေတတ်ပါတယ်။